အကောင်းဆုံးတောင်တက်စတင်ရမှတ်အတွက်ဥရောပ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > အကောင်းဆုံးတောင်တက်စတင်ရမှတ်အတွက်ဥရောပ
အားလုံးစွန့်စားမှု Junkies နှင့်ရှာဖွေသူ Calling! အကောင်းဆုံးတောင်တက်စမှတ်နှင့်မည်သည့်ရထားဖြင့်ထိုသို့ရောက်နိုင်သည်ကိုသင်သိလိုပါသလား? ထိုအခါသင်သည်လက်ျာအရပ်၌ရှိနေ!
အကောင်းဆုံးတောင်တက် Starting Point သို့: FIVE Terre Coastal Trail - ITALY
အဆိုပါ Cinque Terre အတွက်ခြေလျင်ခရီးအီတလီနိုင်ငံပြုကြဖို့အကောင်းဆုံးအရာတစျခုဖွစျသညျ, နှင့်အကောင်းဆုံးတောင်တက်စတင်အချက်များထဲကတစ်ခု. ၎င်း၏တောင်တက်လမ်းကြောင်းဥရောပအတွက်အလှဆုံးအကြားနှင့်သငျသညျတခုပြင်ပတွင်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့သို့မဟုတ်ဆယ်စုနှစ်များအကြားအချို့စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းလိုသူ့တစ်စုံတစ်ဦးလျှင်များမှာ အီတလီအစားအစာများ, ကအီတလီနိုင်ငံရဲ့အံ့မခန်းခံစားရန်အကျိုးအရှိဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ကမ်းရိုးတန်း.
သင် Cinque Terre ခွသောအခါအသင်တို့မူကားပြင်ဆင်ထားလာရန်လိုအပ်ပါတယ်. လမ်းကြောင်းအခက်အခဲနားလည်ခြင်းကနေညာဘက်ကိုအမှုအရာထုပ်ပိုးနှင့်ယခုနှစ်မှန်ကန်သောအချိန်တွင်သွားရာလမ်း, ကောင်းစွာသိရှိဖြစ်ခြင်းဘဝ-ပြောင်းလဲနေတဲ့တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ငြီးငွေ့ slog အကြားခြားနားချက်စေမည်.
• ပြီးတာနဲ့အီတလီနိုင်ငံ, ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထား၏အကူအညီနှင့်အတူ , ရထားနေဆဲ Cinque Terre ရောက်ရှိဖို့ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. ဒေသခံတစ်ဦးရထားရှိပါတယ်, အဆိုပါ Cinque Terre Express ကိုရထား, အဆိုပါအကြားကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်ပြေးရာ ဘူတာ , La Spezia နှင့် Levanto ဗဟို. ဒါဟာအားလုံးငါးမြို့များမှာရပ် (Monterosso, Corniglia, Vernazza, Manarola, Riomaggiore), သငျသညျထိုဒေသတွင်နေတခါနှင့်သင်သည်ထိုသူတို့အကြားရွှေ့ဖို့ယူဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် (သင်အဖန်ဖန်-စိန်ခေါ်လမ်းကြောင်းအပေါ်ခွဖို့ရွေးချယ်မဟုတ်လျှင်). နွေရာသီ၏အဖြစ် 2016, အဆိုပါ Cinque Terre Express ၏ကုန်ကျစရိတ်ခရီးစဉ်နှုန်း€ 4. off-ရာသီစဉ်အတွင်း, ပုံမှန်အားဖြင့်နိုဝင်ဘာလကနေမတ်လမှ, ကုန်ကျစရိတ်€ 1,80 မှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်. ဤသည်ရထားယူထားတဲ့ထိုင်ခုံမပူဇော်ဘူး.
•ဖလောသို့မဟုတ်သို့ဆိုက်ရောက် ရောမမြို့: Firenze စန်တာမာရီယာ Novella ဘူတာမှ, La Spezia Centrale တို့ကိုမှတစ်နေ့လျှင်အနည်းငယ်တိုက်ရိုက်ရထားရှိပါတယ်; အခြားသူတွေ Pisa အတွက်ရထားကိုပြောင်းလဲရန်သင့်အားလိုအပ်. စျေးနှုန်းများ€ 13,50 မှာ start. , La Spezia မှာ, အဆိုပါ Cinque Terre Express ကိုများအတွက်အပြောင်းအလဲ.
အကောင်းဆုံးတောင်တက် Starting Point သို့: Eagle လမျးအတိုငျး - သြစတြီးယား
အဆိုပါ လင်းယုန်လမ်းလျှောက် တက်ဖန်ဆင်းထားသည် 23 ဆက်နွယ်နေအဆင့်ဆင့်, အဆိုပါ Tirol မှတဆင့်တစ်ဦးအသက်ရှူ-ဆည်းပူးနေလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်နာထားတဲ့. ဒေသတွင်း၌အကောင်းဆုံးတောင်တက်စတင်အချက်များ, များစွာသောကဏ္ဍများကိုလွယ်ကူစွာ cable ကိုကားဖြင့်ဝင်ရောက်နဲ့ full အဖြစ်ပြီးစီးနိုင်ပါတယ်- သို့မဟုတ်ဝက်- နေ့ ခရီးစဉ်. ငါတို့သည်ဤဘလော့ဂ်၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအပိုင်းရန်သင့်အားမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်.
သငျသညျတစျနေ့တိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်တစ် Multi-အပတ်ကစွန့်စားမှုစီစဉ်နေပဲဖြစ်ဖြစ် တောင်များ, သင်လင်းယုန်လမ်းလျှောက်တဲ့အကြီးအဖြစ်တွေ့ပါလိမ့်မယ် ပြင်ပအတွေ့အကြုံ. ဒါဟာစူးစမ်းဖို့မတူနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းများကမ်းလှမ်း, သဘာဝနှင့်အတူအတွေ့အကြုံနှင့်ချိတ်ဆက်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်း Pick: ရေကန် Zireiner ကြည့်ရှု
တစ်ဦးကဝက်- ရံဖန်ရံခါတောင်တက်များအတွက်တစ်ရက်လမ်းလျှောက်. အောက်ပိုင်းအင်းချိုင့်၌ Kramsach ထံမှ, အဆိုပါ Sonnwendjoch အိမ်သူအိမ်သားဖို့ကုလားထိုင်ဓာတ်လှေကားယူ. တစ်ဦးကအတိုလမ်းလျှောက်သည့် idyllic Zireiner အိုင်မှဦးဆောင်, နီးပါး 1800-မီတာပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်တစ်ဦးချိုင့်၌တည်ရှိပြီးသော - ပူထဲမှာချွတ်အအေးတစ်ဦးအကြီးအရာအရပျ နွေရာသီ လများ. အဆိုပါလမ်းလျှောက် Zireiner Alm ကျက်စားရာမှဆက်လက် (1,698မီတာ) အဆိုပါကုလားထိုင်ဓာတ်လှေကား၏ထိပ်မှပြန်မီ, သငျသညျကိုပြန်ဆင်းအင်းချိုင့်သို့စီးခွင့်ပြု.
It’s easy to ခရီးသွား from the UK to ရထားသြစတြီးယား. သင့်ထံမှသွားနိုင်ပါတယ် လန်ဒန် ဗီယင်နာမှ, အားဖြင့်တစ်နေ့အတွက် Salzburg သို့မဟုတ် Innsbruck မြန်နှုန်းမြင့်ရထား. ဒါမှမဟုတ်အပြင်မှာနေ့လယ်စာယူ Eurostar ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကနေဘရပ်ဆဲလ်မှ,aThalys high-speed မီးရထား သို့ Cologne နှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ Nightjet အိပ်ပျော်ရထား Innsbruck ရှိရန်, Linz သို့မဟုတ်ဗီယင်နာနေ့ချင်းညချင်း. အဲဒီမှာပြီးတာနဲ့, Tirol မှရတဲ့အများပြည်သူ၎င်း၏ပြည့်စုံကွန်ယက်လွယ်ကူသည် တင်ဆောင်. ရထားသုံးပြီးဒေသတဝိုက်ခရီးသွားလာရန်လွယ်ကူသည်. တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်စေ, လင်းယုန်လမ်းလျှောက်သူအပေါင်းတို့အပေါ်ယူလိုသောတောင်တက်ဒေသခံအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသုံးပြီးတစ်ဦးချင်းစီဇာတ်စင်ရဲ့ start နှင့် finish ကိုမှတ်ကိုရယူနိုငျပါသညျ.
အကောင်းဆုံးတောင်တက် Starting Point သို့: CAMINO DE SANTIAGO – SPAIN
အဆိုပါ Camino စိန့်ဂျိမ်း၏လမ်းစဉ်အတိုင်းအင်္ဂလိပ်လိုလူသိများသည်. All Camino pilgrimage routes lead to Santiago de Compostela as this is where the remains of St James, (စန်တီယာဂို), နဝမရာစုအတွင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်. The pilgrimage was popular in the 10th, 11ကြိမ်မြောက်နှင့် 12 ရာစု, ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းလူကြိုက်များအတွက်ငြင်းဆန်.
20 ရာစုအားဖြင့်, နီးပါးအဘယ်သူမျှမလမ်းကြောင်းမဆိုလမ်းလျှောက်ခဲ့သည်. Then in the late 1970’s and early 1980’s the route became of interest toafew. They began to write and လမ်းကြောင်း map နောက်တဖန်.
21 ရာစုမှာတော့, တစ်ဦးဘုရားဖူးများ၏စိတ်ကူးဖြစ်ကောင်း quaint ဖြစ်ပါသည်. သို့သျောလညျး, တစ်လလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ခေတ်မီစက်ကိရိယာများအဆက်ပြတ်ခံ၏ခေတ္တခဏကျနော်တို့မှာအများကြီးလွတ်မြောက်ဖြစ်ပါသည်.
Sarria သူတို့ Camino က de စန်တီယာဂိုပေါ်စတင်ရှိရာအမှတ်အဖြစ်ဘုရားဖူးများကပိုမိုနှစ်သက်မြို့ဖြစ်ပါသည်. ထက်ပိုပြီး၏ 300,000 အတွက်စန်တီယာဂိုက de Compostela ခရီးသွားကြောင်းဘုရားဖူး 2017, အချို့သော 60% အဆိုပါ Camino Frances ကိုလိုက်နာဖို့ရှေးခယျြခဲ့. ထက်ပြီးပို 80,000 သူတို့ကိုသူတို့ရဲ့ Starting Point သို့အဖြစ် Sarria ရှေးခယျြခဲ့. Sarria ရွေးချယ်ရာတွင်များအတွက်အဓိကအကြောင်းပြချက်က Compostela ချီးမြှင့်ခံရဖို့ဘုရားဖူးများအတွက်လိုအပ်သောအနည်းဆုံးအကွာအဝေးကမ်းလှမ်းကြောင်း (အဆိုပါဘုရားဖူးရဲ့လက်မှတ်). စန်တီယာဂိုရန်အကွာအဝေးရုံငါးအဆင့်ဆင့်ဖုံးလွှမ်းခြင်းနှင့်တစ်ဦးကြီးများအရေအတွက်အားဂုဏ်ယူနိုင်ပါတယ် နေရာထိုင်ခင်းအတွက်ရွေးချယ်စရာများ နှင့်ဘုရားဖူးများအတွက်န်ဆောင်မှု. Sarria ကနေအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်ရလွယ်ကူသည် စပိန်၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများ.
ရထား Sarria ရဖို့ကိုဘယ်လို:
ရထားအရှိဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် အဆင်ပြေ ရွေးချယ်စရာသင်ခရီးထွက်လျှင် မက်ဒရစ်ထံမှ Sarria မှ. တိုက်ရိုက်ရှိပါတယ် ကွန်နက်ရှင် ကြောင်းတစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်မက်ဒရစ်ရဲ့ Chamartin မီးရထားဘူတာရုံအရွက်, နှင့် ခရီးသွားခြင်း ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ခြောက်နာရီအချိန်. ထို့အပြင်, စန်တီယာဂိုက de Compostela နှင့် Lugo နှင့်အတူမက်ဒရစ်ချိတ်ဆက်အမျိုးမျိုးသောရထားရှိပါတယ်, က Sarria ရရန်အလွန်လွယ်ကူသောအရာထဲကနေလာစီယံမြို့ကြီးများ, အတော်ကြာတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုနေ့တိုင်းအတူ. သငျသညျ Renfe ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်ခပ်သိမ်းသောကာလနှင့်ကြိမ်နှုန်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်, စပိန်ရဲ့အမျိုးသားရေးမီးရထားကုမ္ပဏီ.
ခရီးသွားသည့်အခါရထားကိုလည်းအကောင်းဆုံး option ဖြစ်တယ် ဘာစီလိုနာအနေဖြင့်. ဘာစီလိုနာအနေဖြင့်နေ့စဉ်တိုက်ရိုက်လင့်များရှိပါတယ် (သို့မဟုတ်သင် Monforte က de Lemos မှာပြောင်းလဲနိုင်သည်), တစ်နေ့တာအတွင်းရထားနှင့်အတူ (သငျသညျအတူ Ave သို့မဟုတ်မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားပေါင်းစပ်မယ်ဆိုရင် long ကအဝေးသင် ရွေးချယ်မှုများ) နှင့်နေ့ချင်းညချင်းရထား. ဘာစီလိုနာအနေဖြင့်ပျမ်းမျှခရီးအချိန်ဖြစ်ပါသည် 12 နာရီ. ဘာစီလိုနာအနေဖြင့် Sarria မှရထားလည်း Tarragona အပါအဝင်အခြားအဓိကမြို့ကြီးများနှင့်အတူချိတ်ဆက်, Lleida, Zaragoza, Pamplona, Vitoria, Burgos, Palencia, နှင့်လီယွန်.
စန်တီယာဂိုက de Compostela ထံမှ, Renfe Sarria နှစ်နေ့စဉ်ရထားကမ်းလှမ်း: မှာတဦးတည်း5ညနေ (နှစ်နာရီခရီးအချိန်); မှာ 6.07 ညနေ (နီးပါးလေးနာရီခရီးအချိန်နှင့်အတူ).
Lugo ကနေ, အဆိုပါ မီးရထား is also the most comfortable option. Renfe Lugo မှာနေတဲ့ Sarria ရန်သင့်အားရလိမ့်မည်ဟုမြောက်မြားစွာနေ့စဉ်ဆက်သွယ်မှုကမ်းလှမ်း 30 မိနစ်များ.
အကောင်းဆုံးတောင်တက် Starting Point သို့: WESTWEG Trail - ဂျာမနီ
ဒါဟာ Westweg လမ်းကြောင်းအားလုံးဂျာမန်ခရီးဝေးတောင်တက်လမ်းကြောင်း၏မူလအစကဆိုသည်နိုင်ပါသည်. ဒါဟာနောက်ကျောတွင်၎င်း၏မျိုး၏ပထမဦးဆုံးသတ်မှတ်ခဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြစ်လာခဲ့သည် 1900. ထိုကတည်းက, အဆိုပါလမ်းကြောင်းတစ်အကွာအဝေးကိုဖုံးလွှမ်းရန်စိုက်ပျိုးထားပါတယ် 177 မိုင် (285 ကီလိုမီတာ) — starting in Pforzheim in the north and ending in Basel in the south.
အဆိုပါ Mittelweg နှင့် Ostweg မတူဘဲ, အဆိုပါ Westweg အများအားဖြင့်တောင်တို့၏အနောက်ဘက်အားဖြင့်သင်တို့ကြာ. သငျသှားအဖြစ်, သငျသညျအကြီးဆုံးဂျာမန်အနိမ့်တောင်တန်း၏သဘာဝမတူကွဲပြားမှုသက်သေခံပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါသိပ်သည်းထင်းရူးနှင့် Spruce သစ်တောများ. ဤအတောငျကို၎င်း၏အမည်ကိုအထိပေးသည်ကားအဘယ်သို့, မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ treeless မျက်နှာတ Black ကသစ်တော. ဆိတ်ငြိမ်သောတောင်ပေါ်ရေကန်များ, မြင်ကွင်းကျယ် ရော့ခ်မောက်, glacial ချိုင့်, နှင့်တောင်များ.
အကြားမှာတော့, သငျသညျအဖန်ဖန်အမြင့်ဆုံးထိပ်ကိုတက်ပါလိမ့်မယ်. သင်က Hornisgrinde ၏ကုန်းကျော်ခွနှင့် Belchen နှင့် Hochblauen သွားရောက်ကြည့်ရှု. အဆိုပါ Schliffkopf အပေါ်အမြင်ခံစားကြည့်ပါနှင့် Hohloh န်းကျင်မြင့်မွေရိုငျးကှငျးပွငျကျင်လည်ကျက်. သင့်ရဲ့တိုးမြှင်၏တစ်ဦးကစစ်မှန်တဲ့အမြင့်ဆုံးအမှတ်, ဒါပေါ့, အဆိုပါ Feldberg ၏တက်ဖြစ်လိမ့်မည်. အဆိုပါ Black ကသစ်တောထဲမှာအမြင့်ဆုံးတောင်ကြီးတောင်ငယ်.
ရထား Westweg ရဖို့ကိုဘယ်လို:
အများစုမှာတောင်တက်ပို်စီမံခန့်ခွဲအကွာအဝေး၌ထခွဲထွက်နိုင်ပါတယ်. ယင်းတောင်တက်လမ်းကြောင်းတလျှောက်အများဆုံးကျေးရွာများဖြစ်နိုငျသောကွောငျ့ရဲ့ ရထားကောင်းစွာရောက်ရှိ. အဆိုပါတိုးမြှင့်စီစဉ်နေကြောင်းအဘို့ကြီးသောအကူအညီ Schwarzwald Tourismus GmbH သည်တာဝန်ခံအခမဲ့အထွေထွေမြေပုံဖြစ်ပါသည် (Ludwigstrase 23, 79104 Freiburg, www.blackforest-tourism.com). ၎င်းသည်ဒေသအတွင်းနှင့်အခြားဒေသများရှိ KONUS အတွက်ရထားနှင့်ဘတ်စကားလမ်းကြောင်းအားလုံးကိုပြသသည်.
ဖြည့်စွက်ကာ, အများအပြားအသိုင်းအဝိုင်းတောင်တက်ခရီးစဉ်များအတွက်အထူးအကြံပေးချက်များရှိသည်နှင့် တစ်နေ့တာခရီးစဉ် သူတို့ရဲ့ KONUS ဧည့်သည်. သငျသညျအစီအစဉ်ရှိပါကတစ်ဦးမဟုတ်တော့အဖြစ်ကောင်းစွာတစ် SchwarzwaldCard ရဖို့ကအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်နေဖို့. သငျသညျပြင်းထန်စွာကတ်ချိတ်ဆက်အထူးလျှော့စျေးကိုသုံးပါလျှင်ဤကတ်ကောင်းတစ်ဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်ပါသည်.
သင့်ရဲ့တောင်တက်ဖိနပ်ပေါ်တွင်တင်နှင့်အချို့သောသဘောသဘာဝတောင်တက်ခံစားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေ? သင့်ရဲ့ရထားမိနစ်အတွင်းမှာ NO အပိုဝန်ဆောင်ခနှင့်အတူဘွတ်ကင်လုပ်ရန် တစ်ဦးကရထား Save !
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ ဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-hiking-start-points/- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#ဘာ့ဂ် #တောင်တက် #Hikingstartingpoints #trails longtrainjourneys trainjourney ရထားအကြံပေးချက်များ